Creative Space Design: အရောင်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
အထွေထွေ အပြားပြားသော အရောင်တို့ကြောင့် သင် စိတ်ခံစားမှုကို ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စေနိုင်ပါသလား။ ? ? ?
သင့်ဘဝ၊ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ အရာခပ်သိမ်းတို့၌ အရောင်နှင့် မကင်းနိုင်။
နေရာတိုင်း၊ သက်ရှိ သက်မဲ့ အရာဝတု္တတိုင်း၌ အရောင်အသွေး ဟူသည်တော့ ရှိကြစမြဲ။
ဒါ့အပြင် အရောင်တိုင်း၌ လျှို့ဝှက်ချက်၊ ပင်ကိုယ်ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိကြောင်းကို သင်သိပါသလား။ ? ? ?
လူမျိုး၊ ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားမှုကို လိုက်၍ အရောင်တို့ အပေါ် အဓိ်ပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် မတူကြပေ။
အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုတည်း၌ပင်် ခေတ်စနစ် ပြောင်းလဲသည်နှင့် အမျှ အရောင်တို့အပေါ် အမျိုးမျိုးသော အဓိ်ပ္ပါယ်
သြဇာအာဏနှင့် စွမ်းရည်၏ အဓိပ္ပါယ်ကို အမဲရောင်ကဖော်ဆောင်သည်။ ၎င်းအရောင်သည ်ဝတ်ဆင်ထားသည့် လူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျစ်လစ်ပြီး ပိုမိုပေါ်လွင်စေသောကြောင့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွင် ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ခေတ်ဆန်ပြီး ထာဝရ အဓိပ္ပါယ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
ထိုအပြင် အမဲရောင်သည် တင်းသွင်းချက်၏ ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ ထာဝရဘုရားသခင်သို့ နာခံခြင်းသဘောက ိုဆောင်ရန် ခရစ်ယန်ဘုန်းကြီးများသည် အမဲရောင်ကိ ုဝတ်ဆင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သောဖက်ရှင်ပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ အမဲရောင် ဝတ်ဆင်ထားသည့် အမျိုးသမီးသည် အရှုံးပေးခြင်းကို မိမိနှစ်သက်သော အမျိုးသား အားသွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုသည်။ အမဲရောင်က ိုအခါအားလျော်စွာ ဝတ်ဆင်ရသောဝတ်စုံအဖြစ် ဝတ်ဆင်ထားသူသည်် ပြင်းထန်းလွန်းသော ခံစားမှု (သို့) တသီးတခြားနေသည့် သဘော(သို့)အနိဋ္ဌာရုံ၏သဘောကိုဆောင်သည်။ Dracula ကဲ့သို လူဆိုးများသည်မကြာခဏ အမဲရောင်ကိုဝတ်ဆင်ကြပါသည်။
ရိုးသားမှုနှင့် အပြစ်ကင်းသော သင်္ကေတဆောင်ရန် သတို့သမီးသည် အဖြူရောင်ကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။ အဖြူ၏ အလင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို နွေရာသီအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ၎င်းအရောင်ကိုသုံးသည်။ ဖက်ရှင်ခေတ်တွင် အလှဆင်ရာတွင် အဖြူရောင်သည် ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။အရောင်နုသောကြောင့် အခြားမည်သည့်အရောင်နှင့်မဆို တွဲဖက်ပြီး ဝတ်ဆင်ပါက အရာရာ ပြီးပြည့်စုံသွားသည်။ သို့သော်ငြားလည်း အဖြူရောင်သည် အခြားအရောင်ထက် အညစ်အကြေးက ိုသန်ရှင်းအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ခက်သည်ဟု ညွှန်ပြသည်။ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများသည် အဖြူကိုဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးများကင်းစင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။
အနီရောင်သည် ပြင်းထန်သောစိတ်လှုပ်ရှားထိခိုက်လွယ်သည့် ခံစားချက်အများဆုံး ပေးနိုင်မှုအရောင်ဖြစ်ပြီး နှလုံးခုန်ခြင်းနှင့် အသက်ရှူခြင်းတို့ကို ပိုမြန်စေသည့်အသွင်ကို ဆောင်သည်။ အချစ်၏ခိုင်မြဲခြင်းမှတ်တိုင််ကို ကိုယ်စားပြုသောအရောင်လည်းဖြစ်သည်။
ထူးကဲလွန်းတောက်ပလွန်းသည့်အတွက် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်း (သို့) စေ့စပ်ဆွေးနွေးခြင်းများတွင် အနီရောင်အဝတ်အထည်ကို အသုံးပြုပြီး အလှဆင်မြန်းထားသော်လည်း လူတွေကိုကူညီအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကား မပေးနိုင်ပါ။ သူခိုးများအတွက် ခေတ်စား၍ လူကြိုက်များသော် အနီရောင်ကားသည် ပစ်မှတ်ဖြစ်သည်။ အလှအပတန်ဆာဆင်ရာတွင် ထင်ရှားပေါ်လွင်စေသည့်အတွက် အသုံးများကြသည်။ အိမ်တွင်းအလှဆင်သူများ၏ အဆိုအရ အနီရောင်ပရိဘောဂပစ္စည်းများသည် ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိပြီး ဂန္ဓာဝင်ဆန်သည့်အတွက် အထူးဂရုပြုမိအောင် ဆွဲဆောင်ဖန်စားနိုင်ရန် အသုံးပြုကြသည်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော၊ ကြည်နူးဖွယ်ရာ အများဆုံးပေးနိုင်သည့် အရောင်ဖြစ်ပြီးပန်ရောင်ထက်ပိုပြီး ငြိမ်သက်စေသည်။ အားကစားအဖွဲ့များတွင် အသင်းသားများ၏ အဝတ်လဲခန်း၌ အနီရောင်ဖြင့် ဆေးခြယ်ကြခြင်းဖြင့် ဆန်ကျင်ဖက်အဖွဲ့ကို အလဲထိုးအနိုင်ယူမည့်ဟုသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သန်းရောင်ရန်နှင့် ပြိုင်ဖက်၏စွမ်းအင်ကို်အားပျော့စေသည်။
အပြာရောင်သည် ကောင်းကင်နှင့်သမုဒ္ဒရာ၏အရောင်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ လူကြိုက်အများဆုံး အရောင်တစ်ခုလဲဖြစ်သည်။
အနီရောင်နှင့် ဆန်ကျင်ဖက်တုံ့ပြန်ချက်အကြောင်းတရားကိ ုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းအရောင်သည် ငြိမ်သက်အေးချမ်းမှု ပေးနိုင်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်၏အကျိုးသက်ရောက်စေသည့် ဓာတုဗေဒဓတ်ကို ငြိမ်ချမ်းစွာ ပိုမို ထွက်ရှိစေ ပြီး စိတ်ငြိမ်သက်စေပါသည်။ ထိုကြောင့် အိပ််ခန်းများတွင် မကြာခဏသုံးသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ၎င်းအရောင်သည် ဝမ်းနည်းညှိုးငယ်စေသော၊ ခံစားမှုမပါသောအဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်ပြန်သည်။ ဖက်ရှင်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကြံပေးချက်အရ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းသွားသည့်အခါ သစ္စာခံယူခြင်းသင်္ကေတဖြစ်သည့် အပြာရောင်ကို ဝတ်ဆင်သင်သည်။ အပြာရောင်အခန်းတွင်း၌ လူအများသည် ပိုမိုလုပ်နိုင်စွမ်းရည်ရှိကြသည်။ အလေးမသမားသည် အပြာရောင် လေကျင့်ခန်းအတွင်း ပိုမိုလေးလံသော အလေးချိန် ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်ဟု ဘာသာရပ်များတွင် ပြသထားသည်။
အစိမ်းရောင်သည် လက်ရှိလူကြိုက်အများဆုံး အိမ်တွင်းအလှဆင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်အရောင်ဖြစ်ပြီး သဘာဝသင်္ကေတကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းအရောင်သည် အလွယ်ကူဆုံးမြင်နိုင်သည့်အရောင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ကူးစိတ်သန်းဉာဏ်အမြှော်မြင်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ ထိုအပြင် စိတ်ကြည်လန်းဆန်းစေသည်။ စိတ်လက်အပန်းဖြေရန် အစိမ်းရောင်အခန်းတွင်းထိုင်ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားစောင့်ကြည့်ကြပါသည်။ လူနာများ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍ ဆေးရုံများတွင် အစိမ်းရောင်ကိုသုံးသည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းသင်္ကေတကိုဆောင်ရန် လူလတ်ပိုင်းသတို့သမီးသည် အစိမ်းရောင်ကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ အစိမ်းရင့်ရောင်သည် တည်ကြည်ခြင်း၊ ထိန်းသိန်းစော့င်ရှောက်နိုင််ခြင်း၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ မည်သိုပင်ဖြစ်စေကာမှု ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း အကြို ပြပွဲများတွင် ကြောက်ရွံခြင်းဘေးအနာ္တရယ်အတွက် ကံဆိုးတွေကိုယူလာသည်ဟု ယုံကြည်ကြ၍ အပ်ချုပ်သမများသည် အစိမ်းရောင်အပ်ချီကို သုံးရန် ငြင်းဆိုကြသည်။
အဝါရောင်သည် စိတ်ကြည်နူးဖွယ်ရာ ရွှင်လန်းတက်ကြွသော အထူးဂရုပြုခြင်းကို ပိုမိုရရှိသည်။ အဝါရောင်အခန်းတွင်း၌ လူတွေ၏ဒေါသကို လျောပါးစေပြီး ကလေးများပိုငိုမှုကိ ုဖြစ်သည်။ ၄င်းအရောင်သည် အကောင်းဘက်မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ပိုမိုသုံးစွဲခဲလျှင် မျက်စိတွင် ကြည်ရတာယဉ်ပါးဖိုခဲယဉ်းစေသည်။ သမာဓိအားပိုကောင်းစေရန် ဥပဒေရေးရာများတွင် အသုံးများလာသည်။ သက်ရှိကိုယ်တွင်း၌ ဖြစ်ပျက်မှု လျင်မြန််နှုန်း လည်းဘဲကောင်းပါ၏။
အရောင်၏တော်ဝင်နန်းစံသည့် ဂယက်အနက်ရှိပြီး ဓနဥစ္စာဇိမ်ခံပစ္စည်းများ၏ ဆန်ပြားလှသည် ဒီဇိုင်းလက်ရာများတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းးအရောင်သည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပြီး ယစ်မူးအောင်ဖန်စားနိုင်သည်။ ရှားပါးသောသဘာဝအရောင်အဖြစ် တွေ့ရခဲပြီး ပြုပြင်ဖန်တီးထားသောအရောင်ဖြင့်သာ မြင်ရသည်။
သဘာဝမြေပြင်၏ အလွန်ပေါများသော အစိုင်အခဲအဖြစ် ယုံကြည်စိတ်ချတွေ မြင်နိုင်ပါသည်။ အညိုဖျော့ရောင်သည် စစ်မှန််ခြင်းကိုညွှန်ပြ၍၊ အညိုရောင်ရင့်သည် သစ်သား (သို့) သားရေအရောင်နှင့်ဆင်တူသည်ကို အများကလက်ခံနိုင်ကြပါပြီ။ ၄င်းအရောင်သည် ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၊ တစ်သသဖြစ်စေပါသည်။ ယောကျာ်းလေးများ နှင့်ပို၍၊ လိုက်ဖက်သော အကြိုက်ဆုံးအရောင်အဖြစ် ပြောကြပါ၏။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏အလံသည် သန့်စင်ခြင်းနှင့် အပြစ်ကင်းရန်အတွက် မပြိုလဲဘဲတည်ရှိသည့် အရောင်အဖြစ် ကိုယ်စားပြူသည်။
အနီရောင်ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ခံနိုင်ရည်စွမ်းရှိသည်။ အပြာရောင်သည် တရားမျှတခြင်း၊ ဇွဲကောင်းခြင်း၊ သတိဝီရိယရှိခြင်း သဘောကို ဆောင်သည်။ ကြယ်သည်် မိုးကောင်းကင်နှင့် လူအများ၏ အကောင်းဆုံးလက်ရာဖန်တီးစဉ်တွင် ကြိုးပမ်းစွာ ဆောက်ရွက်ခဲ့သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ ရောင်ခြည်တန်း အဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်။
ဖြူပြာရောင်သည် လူကြိုက်အများဆုံးအရောင်သာမက အနည်းဆုံး စားချင့်စဖွယ်အရောင်လည်း ဖြစ်သည်။ သဘာဝအစားစာများတွင် အပြာရောင်သည် ရှားပါးသည်။ အစားအစာသုတေသနရှင်များ၏အဆိုအရ အဆိပ်ဖြစ်သော အစားစာများ၊ ပုပ်သိုးသောအစားစာများ ရှောင်ကြဉ်ရန် သိနားလည်ရမည်။
အပြာ၊ အမဲ(သို့)ခရမ်းရောင်စသည့် မည်သည့်အရောင်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးဆေးကိုအသုံးပြုထားသော အစားအစာများကို စားသုံးသောအ
ခါစားချင်စိတ်ကိ ုလျော့နည်းစေကြောင်းကို လေ့လာသင့်သည်။
အစိမ်းရောင်၊ အညိုရောင်နှင့် အနီရောင်များသည် လူကြိုက်အများဆုံးအစားစာများ၏ အရောင်များဖြစ်သည်။
စားသောက်ဆိုင်များတွင် အစားအသောက်တည်ခင်းရန် အစားအစာများ၏ အစီအစဉ်ကို အနီရောင်ကိုသုံးခြင်းဖြင့် စားချင်စဖွယ်အာသီသကိ ုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။